चाल्टर्न समाजको भेलामा भलिवल प्रतियोगिता
लन्डन । चाल्टर्न नेपाली समाज यूकेले विगत वर्ष जस्तै यसपटक पनि वार्षिक भेला गरेको छ । आइतबार स्थानीय मेरिडियन स्पोर्टस क्लबको खुला मैदानमा झण्डै तीन सय सहभागीमाझ बीबीक्यू, भलिबल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित भेला सम्पन्न...
ग्रीनवीच कप २ अगष्टमा
लन्डन । पांचौं ग्रीनवीच कप आगामी २ अगष्टमा हुने भएको छ । साउथ इष्ट रिजनल तमुधिं लन्डन र नेपाली युथ एसोसिएसन यूकेले संयुक्त रुपमा ग्रीनवीच कप गर्न लागेका हुन् । आइतबार गोर्खा क्लव...
डार्टफोर्ट नेपाली समाजबाट भुकम्प पीडितलाई साढे ६ हजार पाउण्ड
लण्डन । डार्टफोर्ट नेपाली समाज युकेले भुकम्प पीडित नेपालीको सहयोगका लागि करिब साढे ६ हजार पाउण्ड प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको छ । समाजले आइतबार एक समारोहको आयोजना गरी बेलायतका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदुत...
आफ्ना रचना सुनाएर भूकम्प पीडितलाई सहयोग
लन्डन । एउटा तप्का छ जो गीत, गजल अनि मुक्तक सुन्न परे सात कोस टाढा भाग्छ । कतिपय चाहिं साहित्यकारका गफ सुन्नु पर्दा नाक खुम्च्याउंछन् । तर, श्रष्टाहरु आपत विपतमा अग्रपंक्तिमै रहेका उदाहरण प्रशस्त...
लन्डन । नेपालको भूकम्प पीडितका लागि यूकेस्थित युवाहरुले च्यारिटी कन्सर्ट गर्ने भएका छन् । आगामी ३१ जुलाई सांझ लन्डन साउथ ह्यारोस्थित ह्यारो बरो फुटबल क्लवमा कार्यक्रम तय भएको शनिवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको...
गुरुङलाई नेशनल भोलेन्टियरिङ अवार्ड
लन्डन । मधुमेह रोगबारे जनचेतना फैलाउने एकजना भूपू गोर्खा नेशनल भोलेन्टियरिङ अवार्ड जित्न सफल भएका छन् । चर्च क्रुकहाम निवासी ५५ वर्षीया डम्बर गुरुङले डायबेटिज यूके नेशनल इन्सपायर अवार्डस् जित्न सफल भएका हुन् ।...
काठमाण्डू नागार्जुनहिल्सस्थित ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले आउँदो अगष्ट महिनामा लण्डनमा ध्यान शिविर सन्चालन गर्ने भएका छन्। आफ्ना निकट सहयोगी स्वामी आनन्द अर्हतका साथ आउँदो अगष्ट महिनाको दोश्रो साता स्वामी अरुण लण्डन आउन...
लन्डन । फिपा (फाउन्डेशन फर इन्डियन पर्फमिङ आर्ट्स) र थरोक काउन्सिलको विशेष सहयोगमा नेपालका भूकम्प पीडितहरुका लागि एउटा च्यारिटी हुने भएको छ । ‘होम्स् फर ह्युम्यानिटी’ पुनस्थापना योजना सहयोगार्थ विशेष च्यारिटी हुने भएको हो...
भैरहवाबासीको भेला २५ जुलाईमा
लन्डन । भैरहवाबाट आएर लन्डन वाटफोर्ड बसिरहेका नेपाली परिवारले एउटा भेला आयोजना गर्ने भएका छन् । २५ जुलाई शनिवार होलीवेल कम्युनिटी सेन्टर वाटफोर्डमा उक्त भेला हुन लागेको हो । आयोजक मध्ये एक इन्द्रजित गुरुङले...
लन्डन । वी. पी. कोइरालाको चर्चित उपन्यासमा आधारित सिनेमा तीन घुम्तीको पहिलो ग्रयाण्ड रेड कार्पेट प्रिमियर आगामी २२ अगष्टमा हुने भएको छ । अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस् हलमा प्रिमियर हुन लागेको फिल्ममा आवद्ध एक कलाकार ध्रुव दत्तले...
लन्डन । प्रिन्स अफ वेल्स् चार्ल्सले गोर्खाहरुलाई उत्कृष्ट सैनिकको संज्ञा दिएका छन् । एउटा रेजिमेन्ट रोयल गोर्खा राइफल्स् (आरजिआर) को सोर्नक्लिफ ब्यारेक्स्मा आयोजित २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा चार्ल्सले गोर्खाहरुको प्रशंसा गरेका हुन् । खुकुरीले...
मिलन चाम्स् द्वारा जन्मदिनमा वीर विक्रम बनाउने घोषणा
लन्डन । पहिलो फिल्म हंसियाबाट एकाएक चर्चामा आएका युवा निर्देशक मिलन चाम्स्ले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा बिहीवार वीर विक्रम नामक नयां फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् । एक्सन, कमेडी र ड्रामा जेनर मिश्रित हुने भनिएको उक्त...
« अघिल्ला 1 … 384 385 386 387 388 … 443 पछिल्ला »